Neôpaganisma - Wikipedia
Sary famantarana ny fivavahana neôpagàna sasany: slava (rôdnôveria) • selta (neôdroidisma)• jermaika (asatro) • grika (helenisma) • pentagrama • Rôma (nôva rôma) • wicca • ejiptiana (kemitisma) • mesôpôtamiana (natiba kadisa).
Ny neôpaganisma na paganisma môderna na paganisma vaovao dia hetsika ara-pivavahana nabdray singa avy amin' ny paganisma ara-tantara isan-karazany tao amin' ny vahoaka talohan' ny andro ankehitriny. Na dia misy fitovitoviany aza izy ireo, dia samy hafa ireo hetsika ara-pivavahana neôpagàna, ary tsy mitovy finoana, na fanao, na soratra. Ny ankamaroan' ny mpikaroka eny amin' ny oniversite izay manao fandalinanana dia mihevitra azy io ho toy ny hetsika izay mizarazara ho fivavahana samihafa; ny hafa dia manao azy io ho fivavahana tokana izay misy sampam-pivavahana samy hafa.
Miantehitra amin' ny loharanon-kevitra talohan' ny kristianisma, miankina amin' ny lovantsofim-bahoaka sy amin' ny fanoritsoritana ny fombam-poko amin'ny fomba samihafa ny mpanaraka azy ireo; maro no manaraka fiainana ara-panahy izay eken' izy ireo ho vaovao tanteraka, fa ny hafa kosa milaza ho manaraka finoany talohan' ny tantara, na koa miezaka ny mamelona indray ny fivavaham-poko araka izay azo atao. Ny fikarohana akademika dia nametraka ny hetsika pagàna amin' ny sehatra iray, ahitana ny paganisma tsy manavaka fomba, amin' ny lafiny iray, ary ny fiverenana amin' ny pôliteisma amin' ny lafiny iray. Ny pôliteisma, ny animisma ary ny panteisma dia endri-javatra mahazatra amin' ny teôlôjian' ny pagànisma.
Nampifandraisina amin' ny hetsika New Age ny paganisma amin' izao fotoana izao, ka ny manam-pahaizana dia nanasongadina ny fitovizany sy ny fahasamihafany. Ny sehatra akademika momba ny fikarohana momba ny paganisma dia nanomboka nitambatra tamin' ny taona 1990, nipoitra avy amin' ny fikarohana samihafa tao anatin' ny roapolo taona lasa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Neôpaganisma&oldid=1043834"
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 10:56 ity pejy ity.